पानीमा लामो समयसम्म राख्दा किन चारिन्छ छाला ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पानीमा लामो समयसम्म राख्दा किन चारिन्छ छाला ?
नुहाएपश्चात या धेरै समयसम्म पानी चलाउँदा हाम्रो शरीरका छाला चाउरिन्छ। पानीमा भिजेपछि हत्केला, औंला, खुट्टा लगायतका भागको छाला चाउरिएको अनुभव त तपाईले सायदै गर्नुभएको छ। तर, यस्तो किन हुन्छ ? कतिपयले यस्तो हुनुमा जैविक रासायनिक कारण भएको पनि बताउछन ।
यसका अलावा पानीमा भिजेसँगै छालाबाट केही कणहरु बाहिर निस्कने र छाला खुम्चिने भन्नेहरु पनि छन । तर वैज्ञानिकहरुका अनुसार यसरी छाला खुम्चिनु भनेको केवल अस्मोसिस अर्थात् छालाभित्रका कणहरु बाहिर आउनुका मात्र होइन ।
किनकी यदि पानीमा भिजेको बेला खुम्चिने शरीरका त्यस्ता भागमा स्नायुहरु काटिदिने हो भने त्यस्तो चाउरीपन नै देखापर्दैन। यसको अर्थ, पानीमा डुबाउँदा चाउरिएको छालाले यो देखाउँछ की हाम्रो स्नायु प्रणालीले ठिकसँग काम गरिरहेको छ।चर्चित अमेरिकी वैज्ञानिक मार्क चांगिजी भन्छन्, ‘हाम्रो शरीरले बदलिँदो बाह्य वातावरणमा अनुकूलित हुनका लागि आफुलाई वातावरण अनुरुप ढाल्दछ।
पानीमा छाला चाउरिनु पनि त्यही हो । ताकी यसरी चाउरिँदा कुनै चिजलाई सही ढंगले समात्न सकियोस ।’ मार्कका अनुसार मानिसमा मात्र होइन, यसरी पानीमा छाला चाउरिने क्रिया बाँदर तथा यहीं प्रजातिका अन्य जिवमा पनि पाइन्छ।
त्यसैले पानीमा भिजेको बेला हत्केला तथा औंलाहरुको छाला चाउरिनुको कारण मानिस तथा बाँदरले राम्रोसँग पक्रिन सकोस् भन्ने रहेको दाबी जिव वैज्ञानिकको छ।वास्तवमा यो मानिसमा क्रम विकाससँगै विकास भएको क्षमता हो। शोधकर्ताहरुका अनुसार भिजेको हातले हामीले पानीभित्र डुबेका चिजहरुलाई सुख्खा हातले भन्दा छिटोछिटो उठाउन सक्छौं।